Wasiir Dube oo Kenya iyo Itoobiya ku kala tilmaamay Cadaw iyo Saaxiib | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiir Dube oo Kenya iyo Itoobiya ku kala tilmaamay Cadaw iyo Saaxiib
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Dubad ayaa dowladaha dariska la ah Soomaaliya ee kala ah Kenya iyo Itoobiya ku kala tilmaamay Cadaw iyo Saaxiib.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa Kenya ku tilmaamay Dal Hagar daamo ku haya Soomaaliya, waxa uuna muujiyay in sida ay uga go'antahay dowladda Soomaaliya in ay xiriirka u jarto dowladda Kenya, sidoo kale wasiir Dubad ayaa Itoobiya ku sheegay inay ay tahay mid aan waxba u dhibin dalka oo weliba saaxiib dhaw la ah madaxda dalka ugu sarreysa ee uu ula jeedo Farmaajo!
Wasiir Dubad oo kasoo mid noqday wasiiradii uu soo magacaabay Ra'iisulwasaare Rooble horraantii bishii ina dhaaftay ee November ayaa maalmahan warbaahinta la hadlayay isagoo aad mooddo in uu ismuujinayo, wasiirka ayaa adeegsaday erayo xanaf leh xilli uu la hadlayay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2021 ee tartanka kula jira madaxweyne Farmaajo.
Wasiir Dubad ayaa ku tilmaamay dowladda Kenya in ay faragalin ku haysto siyaasadda iyo jiritaanka umadda Soomaaliyeed, waxa uu yiri "Nairobi waa meesha Soomaaliya lagaga soo duulo" isagoo ka hadlayay musharaxiintii dhawaan ka yimid waddanka Kenya ee Shirka ku qabsaday Hotel Jazira ee magaalada Muqdisho.
Asiga oo aad u dhaliilaya Kenya ayaa is barbar-dhigay su'aal waxa uuna yiri "In 10 Musharax intay Nairobi ka soo baxaan Xamar yimaadaan, ma doorashaa? ma ololaa? waa qalqal gelin amniga, shacabka iyo midnimada iyo dalka, ka waran anaga haddii 10 musharax aan xamar ka dirno oo diyaarad ka saarno oo Nairobi u dirno oo Kenyaati ah maxaa dhici lahaa"